Indlu "La Moncheria" enegadi kunye nekhitshi X 2/3 - I-Airbnb
Indlu "La Moncheria" enegadi kunye nekhitshi X 2/3
INDLU "LA MONCHERIA"
Yindlu ephangaleleyo kakhulu kwaye enemibalabala, inegadi enkulu yangaphandle exhotyiswe ngee-hammocks kunye neesofa apho unokonwabela ukuphumla kancinci. Inegumbi lokuhlambela labucala elineshawa eshushu kunye nekhitshi elikhulu kakhulu nelixhotyiswe kakhulu. Ikwanayo nepatio yangaphakathi encinci apho unokufumana isidlo sakusasa ngokuyimfihlo ngakumbi. Indlu ibekwe kwi-3 min. ukuhamba ukusuka kumaza "La Punta", ilungele abakhenkethi, kwaye iphakathi kumbindi wedolophu kunye nolwandle lwase-Estero.
Umyezo okhoyo kwindlu wenza ukuba ube yindawo epholileyo kunye neyokuphumla emva kosuku olunzima kumaza okanye uhambo oluhle kwiSiqithi saseCoiba. Kwaye nesikhundla sendlu sinelungelo elikhulu kuba kukuhamba imizuzu emi-2 kuphela ukusuka "eLa Punta" kunye nesiqingatha phakathi kwedolophu kunye nolwandle lwase-Estero.
Ikhitshi enkulu yenza kube lula kakhulu ukupheka, kuya kuba ngathi usekhaya. Kwakhona iisilingi eziphezulu kunye neengcango ezininzi zenza ukuba kupholile kakhulu nasehlotyeni.